ल हेर्नोस् के के रहेछन त बदाम खानुको फाइदा ? — News of The World
आज : २०७४ माघ ६ गते
पचरौता नगरपालिकाको बजेट रु ३० करोड
पोखरा विविले रोजगारदाता शिक्षा सुरु गर्ने
पार्टीलाई मजबुत बनाउन काँग्रेस जिल्ला सभापतिको छलफल
उपहारमा बाख्रा वितरण
बीउ राख्ने मेशिनको शुभारम्भ
माघ १३ गतेबाट नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा दिउँसो ६ घण्टा सवारी रोकिने
रकम नतिर्नेमा हेलिकप्टर कम्पनी पनि उस्तै, ५४ लाख बक्यौता
ल हेर्नोस् के के रहेछन त बदाम खानुको फाइदा ?
संसार न्यूज संवाददातापौष २, २०७४
जाडोको मौसम छ, जाडोबाट बच्नका लागि धेरै उपाय अपनाइरहनु भएको छ भने तपाइको जाडो भगाउनका लागि बदामले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । तपाइलाई जाडोबाट बचाउन मात्रै यसले भूमिका खेल्दैन, यसले पेटको क्यान्सर हुने सम्भावनाबाट पनि बचाउने स्वस्थ्यविज्ञहरु बताउँछन् । बदाम खानाले खोकी रोक्न पनि उपयोगी मानिन्छ । यसको नियमित सेवनले पाचन शक्ति बढाउने, भोक नलाग्ने समस्या हटाउन समेत मदत गर्दछ ।
बदाम खादा त्यसको बाहिरपट्टी रहेको पातलो बोक्रा नखानुनै राम्रो मानिन्छ । बदाम खाएपछि आधाघण्टा पानी नपिउन पनि स्वस्थ्यविज्ञहरु सल्लाह दिन्छन् । बदाम खानाले फोक्सोको क्यान्सर हुने सम्भावनाबाट बच्न सकिन्छ ।
बदाममा प्रोटिन बढी हुने भएकोले शरीरमा ताकत बढ्नुका साथै शरीरको विकासका लागि पनि सहयोग गर्दछ । बदामले कोलस्ट्रोलका मात्र कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । साथै बदामको केही दाना नियमित खानाले अन्य विमार हुनबाट पनि बच्न सकिन्छ ।
त्यस्तै बदाम खानाले बुढ्यौली पनबाट बच्न सकिने पनि बताइन्छ । यसमा भरपुर मात्रामा पाइने प्रोटीन, चिल्लो, फाइवर, खनिज, भिटामीन तथा एंटी अक्सिडेन्टले अनुहारलाई ताजा बनाउन मदत गर्दछ । साथै यसको तेलले अनुहारको छालामा देखिने रुखोपनलाई पनि बटाउन सकिन्छ ।
ब्दाममा प्रयाप्त मात्रामा क्याल्सियम पाइने हुनाले हड्डीलाई बलियो बनाउन सहयोग गर्दछ । बदामलाई प्राकृतिक रुपमा सहज तरिकाले पाइने सस्तो फल पनि भनिन्छ । यसमा जो कोहीको पनि पहुँच हुन्छ ।
दिनहुँ थौरै मात्रामा बदामा खानाले महिला वा पुरुषमा हर्मोन सन्तुलन राख्न सहयोग गर्ने पनि बताइन्छ ।
वीर अस्पतालले सुरु गर्यो ‘टेलीमेडिसिन सेवा’
आयुर्वेद उपचारमा धेरैको विश्वास
भाइरलका बिरामीलाई धामीझाँक्री, नौजनाको ज्यान जाँदासम्म पुगेनन् स्वास्थ्यकर्मी
जोर्नी प्रत्यारोपणपछिको जीवन, ह्वीलचेयरमा अस्पताल आएका बिरामीहरु हिँडेर घर फर्कन्छन्
काठमाडौँका चर्चित अस्पतालबाट १३ प्रतिशतभन्दा बढी स्वास्थ्य सेवा कर असुली
विर्सने बानी छ भने यी कुराहरु खानुस्